Isitolo esithengisa izinto zasolwandle-Ibanga 600D 3 Ikhava Ephezulu Ye-Bow Bimini Ngosayizi Obehlukene Wokukhiqiza Izikebhe kanye Nefekthri |XGEAR
Marine-Grade 600D 3 Bow Bimini Top Cover enosayizi Ohlukile Wezikebhe
I-XGEAR 3 Bow Bimini Ikhava ephezulu efaka ihadiwe ekhwezayo nebhuthi yokugcina enohlaka lwe-aluminium eyiyintshi elingu-1.Sinamamodeli angu-2 ale-marine-grade 600D 3 Bow Bimini Top, Imodeli#1 enezintambo ezi-4 ezilungisekayo, Imodeli #2 enezintambo ezilungisekayo ezingu-2 ngaphambili nezigxobo zokusekela ezi-2 zangemuva.Kukhona imibala ehlukene eyi-10 nosayizi ohlukene oyisi-6 ongakhetha ukuthi ulingane nezinhlobo ezahlukene zezikebhe.
● Okubalulekile:Ingaphezulu lesikebhe i-Bimini elenziwe ngendwangu ye-polyester yezinga le-Marine-grade 600D kanye nendwangu edayiwe yesixazululo esingu-600D enokuthungwa okuphindwe kabili okugqagqene.
● Uhlaka lwe-aluminum elingu-1'' elinemilenze engemuva enezindonga ezimbili eyinhloko ukuze uthole amandla amaningi kanye nezikhwebu zokukhishwa okusheshayo zamahhala.Izintambo ezingu-2 zenayiloni ezilungisekayo ngaphambili nezingu-2 zokusekela ngemuva.
●Iphakheji:Sinamamodeli angu-2 ale-marine-grade 600D 3 Bow Bimini Top.Okubili kwakho kufakwe yonke i-hardware yokufaka insimbi engagqwali, ibhuthi yokugcina efakwe uziphu enemibala edidiyelwe kanye nokuhlanganisa imiyalelo.Kodwa okuhlukile:
Imodeli #1: Ngezintambo ezi-4 ezilungisekayo;
Imodeli #2: Ngezintambo ezi-2 ezilungisekayo ngaphambili nezigxobo ezi-2 zokusekela ngemuva.
Ungasikala kanjani isikebhe sakho ukuze ukhethe usayizi ofanele we-Bimini top?
● 1. Ngokusebenzisa iteyiphu yokukala bese unquma ukuthi ingaphezulu lizonikeza ubude buni mayelana nenani elifunekayo lokumbozwa komthunzi.
● 2. Iphoyinti lokukhweza elibalulekile lizoba cishe endaweni emaphakathi phezulu ohlangothini ngalunye lwesikebhe sakho.
● 3. Ngemva kwalokhu, linganisa ibanga eliphakathi kwalezi zindawo zokukhweza bese ukwazi ukunquma ububanzi obudingayo.
● 4. Ngenkathi umi ngaphakathi esikebheni, kala ukusuka endaweni ebalulekile uqonde uye phezulu ukuze unqume ubude obufunayo.
● 5. Siphakamisa ukuthi ukhethe usayizi omkhudlwana uma ububanzi besikebhe sakho osilinganisile bufinyelela inani elibalulekile losayizi.
Qaphela: I-Bimini Top akumele ivuleke lapho isivinini sesikebhe sakho singaphezu kuka-25 MPH!
Linganisa i-Bimini phezulu
Okuningiumbala otholakalayo ongawukhetha:
Izithombe ezisuka ekubuyekezweni kwekhasimende
Okwedlule: Nomaphi Isetha Ithenisi Yethebula Nge-Retractable Net
Olandelayo: Intambo Yempi Enzima enama-8-ply kanye Nentambo Yokweluka Yokuqeqeshwa Ukuzivivinya
600D 4 Bow Bimini Ikhava Ephezulu Ngemibala Ehlukene...